Indlu yelizwe kwiConero Park
Yeyona ndlu ilula kwaye iyinyani kwilali yaseMarche.
Ifenitshala yeClassic kunye nesulungekileyo, i-spartan kunye nokugqiba okubalulekileyo.
Iinkqubo zombane eziqinisekisiweyo neziqinisekisiweyo, amanzi kunye negesi.
Kwindawo ezolileyo yeenduli, imizuzu emi-5 ngemoto ukusuka kwi-ANCONA SUD ephumayo, imizuzu eyi-15 ukuya kwengama-20 ukusuka eRecanati naseLoreto, imizuzu eyi-10 ukuya kweli-15 ukuya kwiindlela zeMonte Conero kunye neelwandle zasePortonovo, eSirolo, eNumana naseMarcelli, apho engasebenzi ukuya kumanxweme zekhefu Conero lolwandle.
Ukukwazi ukuhlala ekhaya kunye nasegadini ngenkululeko epheleleyo, ukuba kufutshane kakhulu neendawo zokungcebeleka zolwandle kunye neelali zembali ngaphandle kokunyamezela isiphithiphithi. Ngokuhlwa, xa kuphola phantsi, umntu uye wazama isandla sakhe ekupeyinteni, abanye ekufundeni, abanye kwiipuni ezimbini engceni.
Indlu iye yahlala "i-shabby" encinci, njengoko yayisetyenziswa emaphandleni, kodwa umtsalane ukhona.
Indlu yamkelekile kwaye igadi inkulu kakhulu.
Isiphakamiso: ikofu emnandi ekuzeni kokusa iphulaphule iintaka zokuqala ezivukayo.
Ngomhla unokukhetha phakathi kokuhamba kwi-Monte Conero kunye neembono ezicetywayo zolwandle okanye ukuqubha kumanxweme aseConero Riviera, ePortonovo, eSirolo, eNumana, eMarcelli okanye ePorto Recanati.
Kwizibuko laseNumana ungabhukisha uhambo oluhle ukuya kumanxweme onxweme.
Ufikelela elunxwemeni lwe "Due Sorelle" kwaye ke, ukuba uyafuna, unokufikelela ezikufutshane.
Lumka kuba ufumana iitan ezininzi!
Ukuba imozulu sasingaqinisekanga, umntu ucinga lokutyelela Camerano kunye Osimo ngenxa nemiqolomba inkanuko, Sirolo, Numana, Ancona ngenxa kumaziko abo encinane kwimbali, Offagna emzini ayo aphakathi, Castelfidardo ngenxa iimyuziyam ikhodiyani, Recanati zendlu Leopardi, Loreto yeCawa eNgcwele.
Ngokunyusa amaxesha okuhamba kancinci, unokufikelela ngokulula eCingoli, eMacerata, eSan Severino, eFabriano, eGenga kunye neNdawo yeNdalo yeNdalo yeGola della Rossa kunye neFrasassi enemiqolomba yayo edumileyo, ukumisa kwindawo yokutyela entle kwaye mhlawumbi kwindlu ethile. umvelisi wewayini walapha ekhaya.
UFrancesco Raffaelli: 3491514514
Ixesha lokubhalisa xa ufika: 10:00 - 18:00